Abbaa Alangaa: Finfinnee keessatti shakkamtoonni manneen hidhaa dhokatoo torba keessatti dararamaa turan - BBC News Afaan Oromoo
Abbaan Alangaa Federaalaa Obbo Birhaanuu Tsagaayee qorannoo ji'oota shanii ol fudhateen hooggantoota olaanoo fi ogeessoota 63 to'annoo jala oolchu isaani himaniiru.
Namoota shororkeessummaan shakkamanii to'annaa jala oolaa turan irratti aanga'oonni Ejansii Odeeffannoo fi Tika Biyyaalessaa dhiittaa mirga namoomaa raawwataa turuu isaaniis himaniiru.
Shakkamtootni gara poolisii yookin iddoo turtii seera qabeesaaatti osoo hin geeffamiin dura manneen hidhaa seeraan hin beekkamne fi dhokatoo ta'an keessatti hidhamaa turan jedhan Obbo Birhaanuun.
'Lafa keenya qawween sodaachisanii nurraa fudhatan'
Namoota 5 haleellaa boombii Waxabajjii 23'n shakkaman
Shakkamtootni kunis yeroo baay'ee konkolaataa ambulaansiin geejibsiifamaa turan jechuun Obbo Birhaanu himaniiru.
Namootni miseensa dhaabbilee siyaasaa ta'an miseensummaa dhaabbilee siyaasaa keessaa akka bahan dhiibbaan irratti taasifamaa ture kan jedhan abbaan alangaa federaalaa kun, shakkamtootni meeshaa waraanaa kan isaanii hin taane 'kan kooti' jedhanii akka mallatteessan taasifamaa akka tures qorannaan arganneerra jedhan.
Manneen namoota shororkeessummaan himatamanii keessatti meeshaaalee waraanaa fi asxaawwan ofiif olkaa'uun akka mana isaanii keessaa argame fakkeessuunis gochaalee hojjettoota ejansichaan raawwatamaa turan keessaa akka ta'es himaniiru.
Hooggantootni fi ogeeyyiin ejansichaa dhiittaa mirga namoomaa kunneenin shakkaman 36 to'annaa jala oolaniiru jedhan.
Xiyyaara shan, Doonii lama...'METEC'
Malaammaltummaan walqabatee sakkata'iinsa dhaabbilee mootummaa gurguddoo irratti taasifamen, Korporeeshinii Injinaringii Sibiilaa 'METEC' bittaawwan biyya keessaa fi biyya alaa heddu karaa seeraan alaatiin raawwataa ture jedhameera.
'METEC' fi ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisuunis ogeeyyii qindeessuun qorannoon taasifameera jedhan.
Qorannoon malaammaltummaa dhaabbata 'METEC' irratti taasifame, qoranoolee malaammaltummaa biroorraa adda kan taasisu qoranichi shakkamtoota to'annoo jala osoo hin oolchiin dura taasifamu isaati jedhan.
Bu'aalee qorannoo argaman ilaalchisee 'METEC' birrii biiliyoona 37 oliin dorgommii caalbaasii malee biyya alaatii bittaa raawwateera jedhan.
Adeemsi bittaa kun hariiroo faayidaa dhuunfaafi firummaan kan raawwatame ta'uus himaniiru.
Bittaan kun gatii meeshaalee hanga dachaa 400tti guddisuun kan raawwatame ta'uus qorannoon argamuu himaniiru.
Bittaan biyya keessaas dhaabbilee hoogganoota 'METEC' walin hidhata michummaa fi firummaa qaban irraa caal-baasii malee raawwatame jedhan Obbo Birhaanuun.
Akka fakkeenyaatti dhaabbata tokko irraa caal-baasii malee birrii biiliyoona 205'nin bittaan raawwatamuu himaniiru.
Dooniiwwan lama Abbaay fi Andinnat jedhaman waggoota baay'eef tajaajiluu isaaniirraa kan ka'e faayidaa kennuu hin qaban jedhamee dhaabbata biyya alaaf wayita gurguramuf jedhutti 'METEC' sibiila dooniiwanii caccabsee fayyadamuuf gaaffii dhiyeessee dooniiwwan lamaan bituu himaniiru.
Dhaabbatichi xiyyaara tajaajilaa ala ta'an shan kaampanii biyya Israa'el irraa bitee Afran isaanii hojiin ala ta'anii dhaabatani kan jiran yoo ta'u tokko eessa akka jiru hin beekamu jedhan Obbo Birhaanuun.
Yakkawwan malaammaltumaa kunneenin walqabatees namootni 27 to'annoo jal oolaniiru jedhan.
Yakkawwan kunneenin walqabate shakkamtootni biyya keessatti dhokatan fi gara biyya biraatti baqatanis ni jiru kan jedhan Obbo Birhaanu Tsagaaye hojiin namoota kunneen to'annoo jala oolchus hojjetamaa jira jedhan.
Kanneen biyya keessa bakka garagaraa dhokatanii jiranis to'annoo jala akka oolfaman himaniiru.
Kan biyya alaatti argaman to'annoo jala oolchuuf biyyaalee keessa jiran waliin dubbataa jirra, biyyaaleenis dabarsanii nuuf kennuuf waadaa galaniiru jedhan Obbo Birhaanuu Tsagaaye.
Yakkawwan kunneenin walqabatee konkolaataawwan, kaartaan manaa, eyyamawwan daldalaa, meeshaaleen waraanaa fi sanadootni biroos to'annoo jala oolaniiru jedhan.
To'annaa jala oolun namoota kunneeni dhimma sabummaa namootaa walin hidhata kan hin qabne akka ta'es Obbo Birhaanu Tsagaaye himaniiru.
Finfinnee: Waa'ee haleellaa boombii addabaabayii masqalaa maal beekna?
Hiriira deeggarsaa Dr. Abiy Ahimad irratti boombii darbachuun kan shakkaman shan himatamuufi
Yamanitti baqattoonni Itoophiyaa hedduun ibiddaan gubatanii du’an
8 Bitooteessa 2021
Manguddoonni jaarsummaa 'lagannaa nyaataa dhaabuu' deeman maal jedhu?
Chaayinaan damee omishaatiin addunyaarratti olaantummaa fudhachuuf hangamtu ishee hafa?
'Dhiibamnee filannoo kana keessaa baafamne' - KFO
4 Bitooteessa 2021
Jawaar fa'a Laandimaarkittis 'nyaata hin nyaannu, qoricha hin fudhannu' jedhan
5 Bitooteessa 2021
Waa'ee Appiiwwan ulfa ittisuuf gargaaran hangam beekna?
7 Bitooteessa 2021
Itoophiyatti bineensota bosonaa shan sodaa baduurra jiran
Hanga 'lubbuun jiraachuuf fedha dhabuurra gaheen ture' jette Meegan
Obbo Jawaar Mohaammad faa lagannaa nyaataa dhaabuuf ‘waliigalan’
‘Ani nama du'ee ka'edha’ Baqataa Oromoo Somaalilaanditti ganna 20 booda hidhaa bahe
Shamarreen Gondar waggoota 15'f daldala saal-quunnamtiirra turte dhiibbaa Covid-19 maal jetti?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 23 Fuulbaana 2020
Masriifi Sudaan hidha Abbayyaarratti jaarsummaa idil-addunyaa gaafatan
Siwiizerlaanditti burkaa fi nikaaba dubartoota Muslimaa dabalatee aguuggiin fuulaa dhorkame
Manni maree nageenyaa UN waa'ee Itoophiyaa maal mari'ate?